healthy life style – Page7– Healthy Life Journal
အပျင်းကြီးသော မိန်းကလေးများအတွက် ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အပျင်းကြီးတဲ့ မိန်းကလေးတွေက မိတ်ကပ်တွေအပြည့်နဲ့ အိပ်မောကျသွားတာလို အလှအပအတွက် မလုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်မိတဲ့အပြင် သူတိုရဲ ့ပျင်းတတ်တဲ့ အလေ့အထတချို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ထိခိုက်တာမျိုးပါ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပျင်းတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ သိထားသင့်တဲ့...
မွေးရာပါ အကြောလျှော့ရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း (Myotonia Congenital)
—၊ ပါမောက္ခဦးနေဝင်း (အရိုးခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး )နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. Myotonia Congenital ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းကို သိပါရစေ ဆရာ။ A. ဒီရောဂါဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ မျိုးဗီဇပြောင်းလဲသွားခြင်း (Genetic Mutation) ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေကြရင်...
ဆံပင်အရောင်ဆိုးတော့မယ်ဆိုရင် . . .
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ယေဘုယျအားဖြင့် လူတွေ ဆံပင်အရောင်ဆိုးတယ်ဆိုတာက ရှိရင်းစွဲအလှထက် ပိုမိုလှပသွားလိုတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်အရောင်ဆိုးတာကြောင့် အသွင်ပြောင်းကာ ပိုကြည့်ကောင်းလာသလို ပဲ ဆိုးတဲ့အရောင်နဲ့ မလိုက်ဖက်တာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ဆံပင်အရောင်မဆိုးခင် သိထားသင့်တဲ့ ဆံပင်အရောင်ဆိုးခြင်းရဲ ့...
စိတ်ကျန်းမာဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂရုစိုက်ရမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
လရိပ်မေ (၁) အဆိပ်သင့်စေတဲ့ လူတွေကို ရှောင်ရှားပါ။ (၂) ဘာကိုမှမတွေးဘဲ တစ်ရေးအိပ်စက်အနားယူပေးပါ။ (၃) အဆိုးမြင်အတွေးတွေကို စိန်ခေါ်ပြီး ငြင်းထုတ်ပါ။ (၄) ကိုယ်မလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို မလုပ်နိုင်ကြောင်း ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ငြင်းကြည့်ပါ။ (၅) သင်လုပ်နေကျ အပြုအမူတွေကို ပြောင်းလဲပြီး အသစ်တစ်ခုခုကို...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အစားအသောက်စားရာမှာ တချို့လူတွေ သိလိုကြတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်သင့်အစာကို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီအောင် ပြုပြင်စားနိုင်သလား ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ချင်ရင် အဆင်သင့်အစာတွေကိုရှောင်ပြီး လတ်ဆတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားရမယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆင်သင့်အစာတွေကို ကြိုက်သူတွေအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်...
ခါးနောက်ကျောသန်မာစေမည့် နည်း ၃ သွယ်
(၁) ခန္ဓာကိုယ်ကို မတ်မတ်ထားပါ ခါးတွေကိုကုန်းထားတာ၊ လျှောထားတာမျိုးမဖြစ်စေဘဲ မတ်မတ်နေပါ။ ညောင်းညာတဲ့အခါ လက်ကိုဆန့်တန်းပြီး လက်ဖဝါးတွေနဲ့ ကျောပြင်ကို ထိတွေ့ပေးပါ။ (၂) ယောဂကျင့်ပါ ယောဂကျင့်စဉ်အများစုဟာ ခန္ဓာကိုယ်အလယ်ပိုင်းက ကြွက်သားတွေကို သန်စွမ်းစေပြီး ဟန်ချက်ညီမျှစေပါတယ်။ (၃) နှလုံးသန်စွမ်းစေသော လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ လေ့ကျင့်ခန်းကို...
အမျိုးသမီးတစ်ဦး သွေးဆုံးခါနီးတော့မယ်ဆိုရင်. . .
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အမျိုးသမီးတွေ သွေးဆုံးတဲ့အသက်အရွယ်က ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၅၂ နှစ်ဖြစ်ပြီး တချို့အမျိုးသမီးတွေက အသက် ၄၀အရွယ်နဲ့ အသက် ၃၀နှောင်းပိုင်းတွေမှာ အကြိုသွေးဆုံးဝေဒနာတွေ ပြတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ရာသီလာတာ ပုံမမှန်တော့လို့ အိမ်ထောင်ရှင်မတွေက ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလားဆိုပြီး ထင်တတ်ကြပါတယ်။...
နှာချေခြင်း၊ နှာရည်ညှစ်ခြင်းတို့အတွက် မှန်ကန်သောနည်းလမ်း
———၊ ဇွန် ၊——— နှာချေတာ၊ နှာရည်ညှစ်တာ၊ ချောင်းဆိုးတာနဲ့ နှာခေါင်းပိတ်လို့ မှုတ်ထုတ်တာ စတာတွေလုပ်တဲ့အခါ မမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့လုပ်မိရင် သက်သောင့်သက်သာမရှိဘဲ အန္တရာယ်ပိုများနိုင်ပါတယ်။ လက်ချောင်းဖြင့် သင့်နှာခေါင်းတစ်ပေါက်ကိုဖိပါ နှာခေါင်းတစ်ဖက်ကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ဖိကာ တခြားနှာခေါင်းပေါက်ပေါ် တစ်သျှူးတင်ပြီး ညင်ညင်သာသာ နှာရည်ညှစ်ထုတ်ပါ။ ပါးစပ်ပိတ်ပြီး မျက်စိမှိတ်ထားပါ...
သင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို အားနည်းစေသော အံ့အားသင့်ဖွယ်အချက်များ
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— တချို ့လူတွေက အအေးမိတာနဲ့ တုပ်ကွေးဖြစ်လွယ်ပေမယ့် တချို ့လူတွေကတော့ နှာစေးတာတောင် မဖြစ်ဘဲ ကျန်းမာကြပါတယ်။ ဒီလိုကွဲပြားရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ချင်း မတူလို့ပါ။ ဒါက ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို အားနည်းစေတဲ့အချက်တွေကို လုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။...
စွမ်းအင်အဆင့် မြင့်တက်စေမည့် သဘာဝနည်းငါးသွယ်
မောပန်းပြီးနွမ်းနယ်တာကြောင့် စွမ်းအင်တွေလျော့ပါးနေရင် အချိန်တိုအတွင်း စွမ်းအင်အဆင့် မြင့်တက်လာစေဖို့ အောက်ပါသဘာဝနည်းတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ (၁) သင်နေထိုင်တဲ့ နေရာအဝန်းအဝိုင်းမှာ လိမ္မော်ရောင်၊ အဝါရောင်နဲ့ ခရမ်းရောင်တို့လို တောက်ပတဲ့ အရောင်တွေရှိနေပါစေ။ ဒီအရောင်တွေက စိတ်ခံစားမှုကို မြင့်တက်စေပါတယ်။ (၂) တစ်နေ့ ၁၅ မိနစ်ခန့်...